Liverpool Oo U Adeegsan Doonta Takumi Minamino Saxiixa Lucas Ocampos.
HomeHoryaalka IngiriiskaLiverpool oo u adeegsan doonta Takumi Minamino saxiixa Lucas Ocampos.
February 23, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso Takumi Minamino xagaaga iyagoo raadinaya saxiixa weeraryahanka Sevilla Lucas Ocampos .
In kasta oo Ocampos uu waqti feecan la qaatay Sevilla xilli ciyaareedkan, 26 jirkaan ayaa weli raadsanaya kooxo ka mid ah kooxaha ugu waa weyn kubada cagta Yurub ka dib qaab ciyaareedkiisii ​​Europa League intii lagu jiray 2020.
Liverpool ayaa si xoogan loola xiriirinayay inay u dhaqaaqeyso kubadsameeyaha reer Argentine iyadoo Jurgen Klopp uu doonayo inuu kooxdiisa cusub ku cusbooneysiiyo Anfield.
Sida laga soo xigtay La Razon , kooxda ka dhisan Merseyside ayaa diyaar u ah inay ku darto Minamino dalab kasta oo ku saabsan Ocampos.
Inkasta oo uu wacdaro dhigay todobaadyadii ugu horreeyay ee amaahdiisa uu ku qaatay Southampton, waxaa la soo jeedinayaa in laacibka reer Japan ay u badan tahay inuusan dib u heli doonin booskiisa qorshaha Klopp ee horay u socda.
Minamino ayaa kaliya afar kulan kusoo bilowday Premier League sanadkiisii ​​ugu horeeyay ee Liverpool.